Umuntu uwehlukanisa kanjani umsebenzi kaNkulunkulu nomsebenzi womuntu? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Umsebenzi kaNkulunkulu Uqobo ubandakanya umsebenzi wabo bonke abantu, futhi uphinde umele umsebenzi waso sonke isikhathi somlando. Lokhu kusho ukuthi, umsebenzi kaNkulunkulu uwodwa umela ukunyakaza nomsebenzi kaMoya oNgcwele, kuyilapho umsebenzi wabaphostoli ulandela umsebenzi kaNkulunkulu futhi awusiholi isikhathi somlando, noma akumeli umsebenzi oqhubekayo kaMoya oNgcwele kuso sonke isikhathi somlando. Benza umsebenzi okumele wenziwe ngabantu kuphela, okungabandakanyi umsebenzi wokuqondisa. Umsebenzi kaNkulunkulu uwumsebenzi oyingxenye yomsebenzi wokuqondisa. Umsebenzi womuntu nguwo kuphela umsebenzi womuntu osetshenziswayo futhi ongahlangene nhlobo nomsebenzi wokuqondisa. Ngenxa yokwahlukana kwezinhlobo kanye nokumelwa komsebenzi, yize empeleni konke kuwumsebenzi kaMoya oNgcwele kunomehluko ocacile nomkhulu phakathi komsebenzi kaNkulunkulu uqobo kanye nomsebenzi womuntu.
Lokho okuvezwa uNkulunkulu yilokho uNkulunkulu uqobo ayikho, futhi lokhu kungaphezu kokufinyelela komuntu, kungaphezu kwemicabango yomuntu. Uveza umsebenzi Wakhe wokuhola bonke abantu, futhi lokhu akuhambisani nemininingwane yalokho umuntu ake wabhekana nakho, kodwa kunalokho kumayelana nendlela Yakhe yokuphatha. Umuntu ubonakalisa lokho ake abhekana nakho ngenkathi uNkulunkulu eveza ubuyena—lokhu kuyisimo Sakhe esingokomlando futhi singaphezu kokufinyelela komuntu. Lokho umuntu ake abhekana nakho ngalokho akubonayo kanye nolwazi alutholile sisuselwa ekubonakaliseni kukaNkulunkulu ubuyena. Lokho okubonwayo nolwazi kubizwa ngokuthi isimo somuntu. Sibonakaliswa esisekelweni sesimo somuntu semvelo kanye nasemandleni akhe angempela; ngakho kubizwa ngokuthi isimo somuntu.
Uma umuntu ubengenza lo msebenzi, ubuzoba nemingcele eminingi kakhulu: Bekungamthatha ibanga elithile umuntu, kodwa bekungeke kumfikise esiphethweni sakhe saphakade. Umuntu akakwazi ukunquma ngesiphetho somuntu, futhi, ngaphezu kwalokho, akakwazi ukuqinisekisa ngamathemba nesiphetho esikhathini esizayo. Umsebenzi owenziwa nguNkulunkulu, kepha, uhlukile. Njengoba adala umuntu, Yena uyamhola; njengoba esindisa umuntu, uzomsindisa nokumsindisa, futhi uzomzuza ngokwempela; njengoba ehola umuntu, uzomletha esiphethweni esifanele; futhi njengoba adala futhi ephethe umuntu, uyena okufanele abonelele mayelana nomphumela womuntu namathemba. Yilokhu umsebenzi owenziwa nguMdali.
Okwedlule：Izwe linezinkolo ezinkulu eziningana futhi ngayinye ithi owazo nguNkulunkulu weqiniso, ngakho umuntu angaqiniseka kanjani ukuthi yimuphi uNkulunkulu owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso?
Okulandelayo：Singaqiniseka kanjani ukuthi uNkulunkulu uSomandla unguJesu obuyile?
Ngaphandle Kwensindiso KaNkulunkulu, Ngabe Angikho Lapha Namhlanje Isimo sikaNkulunkulu Siwukulunga futhi ngaPhezu Kwakho Konke Siluthando Kungani iBandla likaNkulunkulu uSomandla lichuma ngokwengeziwe ngesikhathi amabandla eNkathi Yomusa eyincithakalo kangaka? UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke